WikiLeaks oo faafiyay kumannaan Dokumenti oo Sirdoonka CIA leedahay – Kasmo Newspaper
WikiLeaks oo faafiyay kumannaan Dokumenti oo Sirdoonka CIA leedahay
Updated - March 7, 2017 5:14 pm GMT
Ururka uu madaxda ka yahay Julian Assange ee WikiLeaks ayaa saacadihii la soo dhaafay shaaciyay in ku dhow 8,000 oo dokumenti ah oo xambaarsan sirta Hay’adda Sirdoonka Maraykanka ee CIA oo la magac baxay “Vault 7”.
Waxaa laga hadlayaa barnaamij ku saabsan jabsashada sirta “Hackering” oo loo sii marayo qaab-dhismeed ka kooban Virus-ka “Malware” iyo hubka“Cyber-weapons”.
Adeegsiga col-weynahaasi waxay u sahlayaan CIA in ay la socoto Taleefannada iyo Shirkadaha USA iyo Yurub, sida iPhone-ka Apple, Android-ka Google iyo Microsoft, iyo waliba Tv-yada Samsung, oo intaba loo adeegsanayo war-qabad qarsoodi ah.
WikiLeaks waxuu sheegayaa in dalka Shiinuhu dhowaan lumiyay qayb weyn oo ka mid ahayd hubkiisa “Cyber-ka” oo ay ku jiraan “Malware” iyo Virus-yo nooc kasta ah.
Keydkaan cajiibka ah oo wata boqollaal malyuun oo fure “Codes” wuxuu dadka haysta u sahlayaa awoodda jabsashada sirta Shina oo idil.
Wikileaks wuxuu sheegayaa in “Keydkaas Dokumenti” si ruqsad la’aan ah hadda u dhex wareegayso jabsadayaashii hore “Ex-hackers” iyo kunturaadlayda Maraykanka, kuwaas oo qayb ka mid ah macluumaadkaas gacanta u soo galiyay Wikileaks.
Sida ku cad dokumentiga Wikileaks soo bandhigay, Qunsuliyadda USA ee Francfort ayaa loo isticmaali jiray Xarun Dhexe oo laga basaaso Yurub, Bariga Dgexe iyo Afrika.
Afhayeen u hadlay CIA ayaa ka gaabsaday in uu ka bixiyo wax faallo ah saxnimada xogta ku jirta dokumentiga Wikileaks faafiyay.
Mid ka mid ah barnaamijka jabsashada CIA ee Wikileaks tilmaantay waxaa lagu magacaabaa “Umbrage”, waana farsamo buuran oo la isugu keenay weerarka Cyber-ka oo Shiina ka soo ururisay Virus-yo dalal kale oo Russiya ku jirto lagu farsameeyay.
WikiLeaks ayaa qaba in farsamooyinkaasi u sahlayaan CIA in ay indha-shareer ku samayso halka ay ka soo jeedaan weerarrada Cyber-ka, si loo marin habaabiyo baarayaasha.